Vancouver - Gpedia, Your Encyclopedia
Vancouver horizon oct15
Vancouver waa magaalo ku taal Kanada.Waxay ku taal gobolka gobolka British Columbia. Magaaladu waxay leedahay dad tiradoodu tahay 631,486. Marka lagu daro xaafadaha magaalada, aagga waxaa ku yaal dad 2,463,431 ah. Waa magaalo ahaan qowmiyado kala duwan, iyada oo aan jirin koox qowmiyadeed oo sameeya aqlabiyad.
Totem poles Stanley Park Vancouver December 2010
Dadka asaliga ah ee Maraykanka ah ayaa ku noolaa aagga muddo ka badan 10,000 oo sano. Goobjoogayaasha ayaa ogaaday aagga 1592, magaaladanna waxaa la aasaasay 1886kii. Sanadii 2010 magaalada ayaa marti galisay ciyaaraha Olombiga Winter.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Vancouver&oldid=173375"